Nyusa isikrini sakho seLaptop ukuze sikhathalele umqolo wakho nentamo | Iindaba zeGajethi
Baninzi kuthi abachitha iiyure ezingapheliyo phambi kwePC, kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo sikunike izimvo zokulawula i-desktop yakho kwaye ugcine impilo yomqolo wakho (kwaye ngokubanzi) ngelixa usebenza. Namhlanje ndikuzisela ingcebiso ebalulekileyo kunye namanyathelo okusombulula, kwaye kukuba xa sisebenza kunye nelaptop kunye nescreen sesibini sinokuziqhelanisa nezimbo zomzimba ezimbi
Kubalulekile ukuba unokuphakamisa isikrini sekhompyuter yakho, naxa usebenza wedwa kuyo, kodwa ngokufanelekileyo xa usebenza nezikrini ezimbini. Funda nathi indlela yokuphucula indlela omi ngayo kunye nempilo yakho ngokusebenza kunye nelaptop kunye nokujonga esisekondari.
Ziyanda iinkampani ezikhetha ukufaka ilaptop kwizixhobo zomsebenzi zabasebenzi. Kuyabakhulula emsebenzini wabo kwaye kuyabavumela, ukongeza ekusebenzeni ekhaya, ukuthatha uphuhliso lwemisebenzi yabo kunye nayo yonke indawo. Nangona kunjalo, le inengxaki enkulu xa sisebenza eofisiniSiqhela ukuhlala ezitulweni zethu, kwaye ukubhala kwilaptop edesikeni kubangela ukuba intamo iguquke malunga neeshumi elinesihlanu izidanga ezinokuthi zichazwe ngakumbi kubasebenzisi abathile.
Abanye abasebenzisi ukunqanda olu hlobo lokuma bade baguqule i-trunk okanye bahlale kakubi ngeenjongo zokwehlisa amehlo abo kwindawo esembindini yokubeka iliso efakwe kwilaptop. Oku kubangela kungekuphela imikhwa emibi yangasemva, kodwa linani elifanelekileyo lezifo ezigcina zichaphazela imveliso kunye nempilo yabasebenzi, iikhontrakthi, i-hernias kunye nezinye iimeko ezininzi ziyavela. Nangona kunjalo, nangona kubonakala kulula, Ukuphakamisa isikhundla selaptop xa sisebenza kuyo okanye kwiscreen esiphindwe kabini sisisombululo esikhawulezayo nesilula sokuphucula impilo yethu kancinci kancinci emsebenzini, okanye ubuncinci siyiphephe le mpembelelo ingathandekiyo.
1 Ndingayiphakamisa njani ilaptop ukuze isebenze ngcono?
2 Ingcebiso-Ukuma kweLaptop ye-AUKEY
Ndingayiphakamisa njani ilaptop ukuze isebenze ngcono?
Ewe oku kulula, ungasebenzisa nayiphi na indlela onayo ezandleni zakho okanye uthenge naluphi na uhlobo lwemveliso. Inyani yile yokuba kufuneka silumke ukuba loluphi uhlobo lwezinto esizisebenzisayo, Ngamanye amagama, kufuneka sihlale siziphepha izinto ezinje ngeepakethe zeefoliyo okanye amalaphu aqokelela ubushushu kwaye avelise ilint, egcina iphazamisa ukungena komoya kwilaptop, oku kusombulula ingxaki yezempilo kuthi ngokusindisa kwizigulo zangasemva, kodwa oko kuvelisa Iindleko zemali ezingathandekiyo. Ke ngoko, into efanelekileyo kukuba sisebenzise izinto ezenzelwe le njongo.
Akunzima ukwazi ukuba ingakanani into ekufuneka siyiphakamisile ilaptop, eyona ilungileyo kukuba amehlo ethu abekwe ngaphezulu okanye ngaphantsi kwinxalenye ephezulu yesikrini, apho iikhamera zekhonferensi zihlala zikwiilaptops, Le yindlela esihamba ngayo ngokubanzi ukufezekisa intamo ethe tye kunye nokuma kwamehlo, ngaloo ndlela kuthintelwe izifo ezidibeneyo kunye ne-presbyopia yexesha elide.
Ingcebiso-Ukuma kweLaptop ye-AUKEY
Oku kuma kweelaptops ezingaphantsi kwe-17 ye-intshi esiye sazivavanya kwizixhobo ezaziwayo zeAukey zisombulula ingxaki kakuhle. Yakhelwe kwialuminium, ke iyakhanya kwaye iyamelana ngaxeshanye. Ukuba ungumsebenzisi oqhelekileyo weApple okanye iimveliso ezenziwe ngealuminium, inyani kukuba ijongeka intle kwidesktop, inika umbono wokuqhubeka.
Inemingxunya ngasemva xa kunokwenzeka udlule intambo kwimingxunya kwaye ke yonke into ilungelelaniswe kakuhle. Inkxaso inokhuselo lwesiliconeNgale ndlela awuzukufumana monakalo, kwaye ngenxa yesiseko sayo sealuminium uya kuphulukana nesithuba esincinci, oko kukuthi, unokubeka izinto ezinje ngekhibhodi okanye i-HUB apho uhlala unayo.
Njengoko besesitshilo, le dock yenziwa ikumgangatho olungileyo kwaye iphakame kakhulu, nangona kukho ezinye ezingekho lula kwimarike kodwa ngokungafaniyo kokufakwa kwemali. Oku kuhlala kubeka nayiphi na ilaptop kubude obuqhelekileyo be-24-27 ye-intshi esweni, iyenza iqabane elifanelekileyo lomsebenzi wescreen. Ungayifumana 34,99 € en Akukho mveliso ifunyenweyo isuka kwiAmazon.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Phakamisa isikrini sakho seLaptop ukuze unakekele umqolo wakho nentamo